Vakio ny Fahano ary mahazoa tranokala maimaim-poana mandritra ny 12 volana | Martech Zone
Alatsinainy Aprily 2, 2007 Douglas Karr
Te hanome anao loha fotsiny ianareo rehetra! Ny orinasa fampiantranoana iasako dia manolotra fampiantranoana maimaimpoana mandritra ny 12 volana rehefa misoratra anarana ianao. Namako iray, Amol Dalvi no voalohany mitsapa ny fifanarahana. Ampahafantaro ahy raha manararaotra ny fifanarahana ianao ary azoko antoka fa hanao bilaogy momba anao aho mba hanampiana anao hampiakatra ny laharanao.
Nisafidy ny mpampiantrano ahy aho aorian'ny taona iray nitsambikina tamin'ny mpampiantrano. Nizaka ny fotoan'andro aho, fanohanana mahatsiravina, fanavaozana miadana, ireo asa… mandra-pahatongako niaraka tamin'i Jumpline. Nahita Jumpline aho tamin'ny fandavahana Netcraft izay nandinihako ireo mpampiantrano manana ny taha ambany indrindra amin'ny taha-karama. Tapitra ny ainy fa ny Jumpline dia saika tsy nisy kilema ary nanana ny fotoana tsara indrindra amin'ny Internet.
Nifindra tany Jumpline ny tranokalako rehetra (manodidina ny 25) aho ary faly nanomboka teo. Izy ireo dia mihazakazaka ny fampiharana farany sy lehibe indrindra amin'ny alàlan'ny mety VDS. Raha mila MySQL ianao dia tsindrio fotsiny dia apetraka. Te PHP? Zavatra mitovy. Ity no fonosana farany ho an'ny technophobe izay matahotra an'ity mumbo-jumbo fampiantranoana ity. Izy ireo no karazana fampiantranoana nosoratanao anarana ary manadino fa tsy mila miahiahy momba azy ireo ianao.
Manararaotra ny tolotra, misoratra anarana amin'ny sakafoko ary ho hitanao ny sora-baventy doka isaky ny paositra. Ity tolotra ity dia ho an'ny tapa-bolana ho an'ny mpamaky ahy. Araraoty izany! Tsy misy fatotra!
Apr 2, 2007 ao amin'ny 2: PM PM
Te-hisaotra fotsiny aho noho ny nanoloranao ahy ny Jumpline herinandro vitsivitsy lasa izay. Ny famindrana ny bilaogiko WordPress ho any amin'ny mpampiantrano vaovao dia tsio-drivotra ary ny tontonana fanaraha-maso ny mpampiasa Jumpline dia manamora ny fitantanana ny zavatra toy ny MySQL, ny adiresy mailaka, sns.
Tiako kokoa ny fampiantranoana virtoaly arosony koa. Manana mpizara Apache manokana aho izao, ka tsy misy adala intsony mamaky ilay mpizara Apache nozaraina toa ahy tamin'ny mpampiantrano taloha 🙂
Nanana ny bilaogiko nihazakazaka tao amin'ny Jumpline nandritra ny herinandro vitsivitsy aho ary tsara dia lavitra.
Mirary soa amin'ity fampiroboroboana ity.
Apr 2, 2007 ao amin'ny 7: PM PM
Misaotra, Dean! Tsy hataoko ao ambadiky ny orinasa ny lazako raha tsy a) Nampiasako izy ireo ary b) Matoky azy ireo aho. Nanolotra an'i Jumpline taloha ho an'ireo mpamaky ahy aho, saingy tsy dia nanao an-kerisetra izany. Vao avy namaky tantara mahatsiravina be dia be aho tato ho ato, ny tsy fahampiana fanampiana, ary ny fihinanako biby fiompy lehibe indrindra - kinova rindrambaiko taloha!
Iray amin'ireo plugins nosoratako fa nahazo valiny TONS aho fa tapaka izany ary tsy mandeha - fa ny tena izy dia ny kinova PHP na kinova izay tsy nanana tranomboky iraisana na nampidirina.
Ka nanapa-kevitra ny hametraka ny volako amin'ny toerana misy ny vavako aho. Raha tsy mandeha io dia azoko antoka fa ho henoko izany!
Apr 3, 2007 amin'ny 9: 14 AM
Hmm toa mahaliana ihany. Manantena ny hanova ny mpampiantrano ahy aho izao ary inona no tsara kokoa noho ny tolo-kevitra am-bava nataon'ny manam-pahaizana momba ny teknolojia. Heveriko fa manararaotra an'ity tolotra ity aho.
May 24, 2008 amin'ny 11: 09 AM
Andramo ny free-whd.com, lahatahiry fampiantranoana tranonkala maimaimpoana io. Azoko antoka fa hahita ilay mpampiantrano maimaim-poana tadiavinao ianao.